Cabdi Xaashi oo Farmaajo iyo Rooble u gudbiyey guddi doorasho balse kadib maxaa dhacay? • CNN Somali
CNN SOMALI TV
La Xiriir CNN SOMALI ( Contact US )
HomeSomaliaCabdi Xaashi oo Farmaajo iyo Rooble u gudbiyey guddi doorasho balse kadib maxaa dhacay?
Cabdi Xaashi oo Farmaajo iyo Rooble u gudbiyey guddi doorasho balse kadib maxaa dhacay?
November 5, 2020 cnnsomali Somalia, Somaliland, Wararka Maanta 0
Muqdisho (CNN Somali)
Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa magacaabay xubno cusub oo gobollada Waqooyi ku metelaya guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka.
Warqad kasoo baxday xafiiska Cabdi Xaashi ayaa lagu magacaabay afar xubnood oo qeyb ka noqonaya guddiyadaasi, kuwaasi oo uu ugudbiyey ra’iisal wasaare Rooble, balse uusan qaadan oo uu ka reebay guddigii uu ku dhawaaqay.
Xubnaha uu magacaabay guddoomiyaha golaha aqalka sarre ayaa loo gudbiyey ra’iisal wasaaraha maalmo ka hor inta uusan ku dhawaaqin guddiga cusub, taasi oo keentay in maanta uu Cabdi Xaashi ka hor-yimaado guddiga cusub ee ku dhawaaqay Rooble.
Cabdi Xaashi ayaa ku doodaya in Somaliland ama gobolada waqooyi aysan mateli doonin xubnaha ay soo xushay xukuumadu, isagoona warqad ‘diidmo’ ah maanta u gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya.
Marka aan la tashaday Madaxda, salaadiinta, siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedka beelaha gobollada waqooyi ee Somaliland ee soo jeediyay magacaabista xubnaha guddiyada doorashada dadban ee 2020/21 ay iyagu u madax-banaanadaan, si lamid ah xubnaha guddiyada kale ee ka imanaya dowladaha xubaha ka ah dowladda federaalka, isla markaana la tix-geliyo habracyadii meel-marka ahaa ee lagu galay doorashadii dadbaneyd ee ka dhacday dalka sanadkii 2016-ka. Waxaan go’aansaday in aan magacaabo guddigan” ayuu ku yiri waraaqdiisa magacaabista.
Hase yeeshee sida muuqata dhinac ayaa la isaga tuuray, waxaana laba maalin kadib oo ahayd 4-tii bishan uu ra’iisul wasaaraha soo saaray liiska guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka, ayada oo xubnaha Somaliland ay soo magacowday xukuumadda.
Si kastaba, arrintan ayaa dab kusii qabaneysa xiisada ka dhalatay doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland, oo maalmihii u dambeeyay uu ka taagna muran xoogan oo u dhaxeeya xukuumada iyo guddoomiyaha golaha aqalka sarre.
Khilaafkii webiga nile oo aan weli ku heshiin Masar Ethiopia & Sudan
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Duraan Faarax Axmed oo lala Beegsaday Caawa Qarax
Macaamiisha Sharafta leh waxaa la ogeysiinayaa in CNN SOMALI idin siineyso Xayeesiin Qiimo badan ee idin raali galisa
Musharax Madaxweyne 2021 – 2024
Xildhibaanka Beesha Axmed Faarax oo Markale dib loogu doortay kursiga Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle
Faransiiska iyo Mareykanka iyo Australia oo weji cusub yeelatay Waa Maxay Sababta? ( Akhriso )
Beesha Caalamka Warbixin kasoo Saartay Khilaafka Madaxweynaha & Reysul Wasaaraha Somaliya
Abiy Ahmed ayaa ku faanay awoodda ciidan
Imaaraadka Carabta oo siinaya Dhalasho dadka Ajnabiga ah
Gariiga oo Sheegay inay Turkida Tahriibiso Soomaalida
Sheekh Shaakir oo Galmudug yiri AHLU SUNA kama aysan bixin
Mahdi Guled oo Yiri Wasiir Dube waa LIBAAX
Geeridii Cabdi Muriidi Dheere AJAKIS
Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi oo soo saray habraaca doorashada Aqalka Sare ee Somaliland
PUNTLAND oo Somaliland u dirtay dalab la xiriira dilkii IBRAAHIM Cabdishakuur
Ergeyga Qaramada Midoobay James Swan oo gaaray magaalada Hargeysa
Faiza Sh Abdulahi Ahmed Muuse: oo Boos ay Dhaxal u Leedahay Looga Dhistay Si Xoog ah
Axmed Madoobe oo shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay in doorashada la billaabo
Sidee loo fuliyey qaraxii lagu dilay xildhibaan Khaliif?
Deni Axmed Madoobe & Waare oo ka wada hadlaya Xaalada Dooroshooyinka
Guddoomiyaha gobolka Gedo oo ku hanjabay in maamulka Jubbaland ugu magacaaban degmada Ceelwaaq